DEG DEG+FAAHFAAHIN: Warar dheeraad ah oo ka soo baxaya Dagaalo dhexmaray Puntland & Somaliland iyo Wasiiro. – Puntlandtimes
DAMAL-XAGARE(P-TIMES) – Somaliland ayaa wararku sheegayaan in ay weerar ku qaaday wafdi uu hogaaminayay wasiirka Waxbarashada ee Puntland oo doonayay in ay kormeer ku sameeyeen Dugsiyada Waxbarashada ee gobalka Sanaag, halkaas oo uu ka socdo Imtixaanka Shahaadiga ah ee ay qaadayso wasaaradaas.
Ciidamada Somaliland oo tan iyo xalay ku jiray abaabul dagaal ayaa subaxnimadii hore ee saaka diiday in dhinaca Puntland wafdi ka socda ay tagaan deegaano ay ka mid yihiin Damal-Xagare Ceelbuh iyo Carmale oo katirsan gobalka Sanaag.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in duhurnimadii Is rasaaseyn kooban ay ka dhacday deegaanka Carmale oo ay ku hakadeen wafdiga Puntland.
Wasiirkan ay weerartay Somaliland ayaa ka soo jeeda deegaanka DamalXagare oo ay u didan tahay Somaliland, waxaana wararku sheegayaan in uu jiro khasaare kala gaaray labada dhinac.
Warar ka madax banaan labada dhinac ayaa sheegaya in khasaaraha dhimashada uu gaaray 2 askari oo ah dhinacyada dagaalamay, sidaas oo kalena ay jirana dhaawacyo loo kala qaaday Badhan iyo Ceerigaabo.
Rasaas goos-goos ah ayaa laga maqlayaa deegaanka banaankiisa oo ay labada dhinacba ku dagaalamayaan, waxaana cabsi laga qabaa in dagalka labada dhinac uu noqdo mid balaarta oo ku fida deegaanka Yubbe oo ay labo ciidan is horfadhiyaan.
Saraakiil kala duwan oo katirsan labada dhinac oo ay la hadashay Puntlandtimes.com wey kagaabsadeen in ay arrimahan ka hadlaan, waxayna qolo kasta dhinaca kale ku eedeysay in ayadu dagaalka soo qaaday, mana jiraan warar ka baxsan sheegashadooda.
Xiisadda labada maamul ee kuwajahan isku haysiga gobaladaas ayaa korortay tan iyo markii uu Madaxweyne-nimada Somaliland ku guuleystay Muuse Biixi Cabdi oo weerarkii ugu horeeyey ku qaaday magaalada Tukaraq, kana qabsaday Puntland.
Suldanka 2 wajile ah aya ka masula dhiiga kuqubta 2 mamul dhexdeda.suldanka halaca ah oo dhankasta uxiira khaladka wa meshas.
Warka qqarasta bsdan naga kala yareeya.
allaha kala qaboojiyo umadana xaqa ha tuso
SOOMAALAAY MIDNIMO WAA LAMA HURAAN REER SANAAGOW MIDNIMO KU DADAALA SULDAANKU WAA SHAQSI U SHEEGA RUNTA SHARAFTANA ILAALIYA INSHA ALLAH